“ထူးထူးဆန်းဆန်း ညီအစ်ကိုလေးယောက်လုံး တပြိုင်ထဲ မိန်းမယူကြတဲ့ ဆီဆိုင်မြို့က မင်္ဂလာဆောင်”
May 3, 2019 Cele Love 0
“ထူးထူးဆန်းဆန်း ညီအစ်ကိုလေးယောက်လုံး တပြိုင်ထဲ မိန်းမယူကြတဲ့ ဆီဆိုင်မြို့က မင်္ဂလာဆောင်” ဆီဆိုင် မြို့မှ ထူးခြားတဲ့ ညီအကိုလေးယောက်တပြိုင်ထဲဆောင်တဲ့ မင်္ဂလာဆာင်ပွဲ ဆီဆိုင် မြို့က သူများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားတဲ့ စရိတ်ချွေတာ ပေါ်ပျူလာဖြစ်စေခဲ့လို့ အမှတ်တရ တင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။ ချစ်ဘော်ဒါတို့လဲ အစီအစဉ်လေးဆွဲလိုက်ကြဦးနော် …. […]
YBS ပေါ်မှာ မိန်းက​လေး​တွေကို​နောက်​က​နေ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး လိုက်​လုပ်​​နေတဲ့ ဗီဒီယို
YBS ပေါ်မှာ မိန်းက​လေး​တွေကို​နောက်​က​နေ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး လိုက်​လုပ်​​နေတဲ့ ဗီဒီယို YBS ပေါ်မှာ မိန်းက​လေး​တွေကို​နောက်​က​နေမဖွယ်​မရာလိုက်​လုပ်​​နေတဲ့ ဗီဒီယို ဒီ​နေ့ YBS 35 ​ပေါ်မှာကြုံလာရတဲ့ပြသနာပါ မိန်းခ​လေးတိုင်းဖတ်​ကြည့်​​ပေးပါရှင်​ မိန်းခ​လေး​တွေကို​နောက်​က​နေ မဖွယ်​မရာလိုက်​လုပ်​​နေတာပါ …။ အခုခံရတဲ့ညီမ​လေး​တွေကိုဒီလိုလုပ်​​နေလို့​နေရာ​တွေလဲ​ပေးတာ​တောင်​ ..သူကအဲ့ညီမ​လေး​နေရာ​ပြောင်းတဲ့​နေရာထိ​နောက်​​နေအဲ့လိုလိုက်​လုပ်​​နေတာပါ …ခံရတဲ့ညီမ​လေး​တွေကတိုင်းရင်းသူ​လေး​တွေပါအလုပ်​ကိစ္စ​ကြောင့်​ရန်​ကုန်​လာတဲ့သူ​တွေပါ …။ အဲ့လိုလုပ်​ခံ​နေရရင်​ရှက်​ကြ​ကြောက်​ကြပါတယ်​ ..​ကြောက်​​ပေမဲ့လုံးဝမရှက်​ပါနဲ့​ ဘေးလူကို​ပြောပြပါ […]
ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ်ခါနီးတိုင်းသောက်ပေးရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီးသောက်ပေးလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….. (၁) မူးမော်ခြင်းကင်းဝေးစေမယ် သတ္တုဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် မူးမော်ခြင်းတွေ၊ ခေါင်းနောက်တာတွေကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။ […]
မြန်မာပုဆိုးလေးဝတ်ပြီး ကနေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် Video
မြန်မာပုဆိုးလေးဝတ်ပြီး ကနေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရင်​ခုန်​စွဲမက်ဖွယ်​ကောင်းတဲ့ ခန္တာကိုယ်​​ကောက်​​ကြောင်းအလှကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က​တော့ ချစ်ရတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း မိသားစုရှေ့က ရပ်တည်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြတ်သားတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သင်ဇာလေးက ရုတ်တရက်ကြီး ချစ်သူကောင်လေးကို ချပြလိုက်တာကြောင့် ပရိသတ်​​တွေအားလုံးလည်း Surprise ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ […]
Game ဆော့နေရင်းတန်းလန်း ထိုင်နေတဲ့ခုံပေါ်မှာတင် အသက်ပြောက်သွားတဲ့ gamer ကောင်လေး
Game ဆော့နေရင်းတန်းလန်း ထိုင်နေတဲ့ခုံပေါ်မှာတင် အသက်ပြောက်သွားတဲ့ gamer ကောင်လေး ယနေ့ခေတ်ကာလမှာတော့ ကလေးသူငယ်တော်တော်များများသာမက အသက်အရွယ်ရောက်နေတဲ့ လူကြီးတွေကပါ ဂိမ်းတွေကို အရမ်းဆော့လာကြတာတွေ့ရပါတယ် …။ ဒီဂိမ်းကြောင့်ဘဲ ဝင်ငွေအများကြီးရကာ အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရှိကြသလို ဒီဂိမ်းကြောင့်ဘဲ ဘဝပျက်ပြီး ရောဂါတွေရကာ ဒုက္ခပေါင်းစုံကို ခံစားကြခဲ့ရသူတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ် …။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း […]
ကောလင်း မေ ၃ လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှဇနီးနှင့်သမီးအားဓါးဖြင့်ခုတ်သတ် ………………………………………… ကောလင်းမြို့နယ် ၊မြင့်ဒူးရွာတွင် ယနေ့နေ့လည်(၂)နာရီ အချိန်က လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်ရာမှ ဇနီးနှင့်သမီးအားဓါးဖြင့်ခုတ်သတ်မှု့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ မြင့်ဒူးရွာနေ မင်းမင်းအောင်နှင့် ခင်ထက်ထက်လှိုင်တို့သည် လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ မင်းမင်းအောင်မှ ၄င်း၏ဇနီးခင်ထက်လှိုင်နှင့် (၇)လအရွယ်သမီးဖြစ်သူ ဇင်ရတီမိုးမြင့်တို့အား ဓါးဖြင့်ခုတ်ရာ လည်ပင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ […]
“ခေါင်းကိုက် လာပါက လျှင်မြန်စွာပျောက်နည်းလေးပါ” လွယ်ကူတဲ့နည်းဖြစ်လို့ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင် ခေါင်းကိုက်လျှင် ချင်းကပ်ပါ …။ ခေါင်းကိုက်။ နထင်ကိုက်။ ဇက်ကြောတက်မျက်ရိုးကိုက အလုပ်တစ်ဘက်နှင့် ဆေးခန်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လျှင် ချင်းတက်ကိုပါးပါးလှီးပြီး နထင်နှစ်ဘက်တွင်ကပ်ပေးပါ …။ ဇက်။ဂုတ်ကျီးပေါင်းရှိသူများ။ကျီးပေါင်းရ င့်၍မူးသူ။ ဇက်ကိုခဲဆွဲကုသနေရသူများသည် ဇက်ရင်းကျီးပေါင်းဖုပေါ်တွင်ချင်းကိုပါး ပါးလှီးပြီး ၄-၅ နေရာကပ်နိုင်ပါသည် …။ […]
ကျပ် သိန်း ၁၅၀၀၀အား ပုသိမ်မြို့မှ ထီစပ်တူထိုးသူ ၂ ဦး ကံထူး(ရုပ်/သံ)
ကျပ် သိန်း ၁၅၀၀၀အား ပုသိမ်မြို့မှ ထီစပ်တူထိုးသူ ၂ ဦး ကံထူး(ရုပ်/သံ) ===================== ၃ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုအား ပုသိမ်မြို့မှ ဆွတ်ခူးခဲ့ခြင်း ထီကို စပ်တူထိုးရာမှ ယင်းကဲ့သို့ ကံထူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။ “ထီပေါက်တယ်ဆိုတာ ၂ […]
သနားစရာကလေးအတွက် ပရဟိတအဖွဲ့ကနေ အလှူငွေ၎သိန်းလှူခဲ့ပေမယ့် လူနာထံငွေ၈သောင်းပဲ ပေးလို့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အိမ့်ထရစ်ရှာ
သနားစရာကလေးအတွက် ပရဟိတအဖွဲ့ကနေ အလှူငွေ၎သိန်းလှူခဲ့ပေမယ့် လူနာထံငွေ၈သောင်းပဲ ပေးလို့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အိမ့်ထရစ်ရှာ ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ရတဲ့ အိမ့်ထရစ်ရှာကတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလဲ ပြုလုပ်နေခဲ့သလို အလှူအတန်းတွေလဲ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ယနေ့မှာတော့ အိမ့်ထရစ်ရှာတစ်ယောကိ သနားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ ကလေးငယ်လေးအတွက် အလှူငွေ4သိန်းလှူထားပေမယ့် လူနာထံ ပိုက်ဆံ8သောင်းပဲ ရောက်ရှိခဲ့လို့ […]
တစ်ညတည်းနဲ့ ကြည်လင်ဖြူဝင်းတဲ့မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်စေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း(၅)မျိုး
တစ်ညတည်းနဲ့ ကြည်လင်ဖြူဝင်းတဲ့မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်စေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း(၅)မျိုး အလုပ်တွေများတာကြောင့် အသားအရေနဲ့အလှအပကို ဂရုမစိုက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ြ်ဖစ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများလို့၊အိပ်ရေးပျက်လို့ အသားအရေမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ညစ်နွမ်းနေတဲ့အသားအရေကို ပြန်ပြီး ကြည်လင်လာစေဖို့ သဘာဝနည်းလေးတွေနဲ့ ပေါင်းတင်ပေးချင်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အသားအရေကြည်လင်စေမယ့် အကောင်းဆုံး သဘာဝပေါင်းတင်နည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် …. ။ (၁) နေလောင်တာနဲ့အသားအရောင်မညီတာတွေအတွက်ပေါင်းတင်နည်း အာလူးတစ်လုံးကို […]